प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वाभिमानी नेपाली विष्णु धितालको जन्म दिनको शुभकामना - Sainokhabar
होमपेज / राजनीति / प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वाभिमानी नेपाली विष्णु धितालको जन्म दिनको शुभकामना
प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वाभिमानी नेपाली विष्णु धितालको जन्म दिनको शुभकामना
आइतबार, फागुन ११, २०७६ , साइनो खबर
देशलाई केक बनाएर नकाट्नु प्रधानमन्त्रि ज्यू
प्रिय प्रधानमन्त्री K P Sharma Oli ज्यु l
स्वाभिमानी नेपाली विष्णु धितालको प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीलाई जन्म दिनको शुभकामना दिदै ब्याङग प्रहार गरेका छन ।
आफ्नो ६९ औं जन्मोत्सव मनाइरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार एकपछि अर्को संकटमा फस्न थालेको उनको शुभकामनाले प्रस्ट्याएको छ । ओली सरकारलाई बाह्यभन्दा बढी आन्तरिक संकटले फसाएको देखिन्छ । गोकुल बास्कोटा काण्डले आम जनमानसमा नैरास्यता पैदा गरेकाले सरकारमाथि तीव्र आलोचना भइरहेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो ६९ औं जन्मोत्सवमा नेपाललको नक्साको केक बनाएर काटेको प्रति धितालले ब्याङग प्रहार गरेका हुन उनले प्रधानमन्त्रि ओलि यसरी शुभकामना दिएका छन ।
तपाईलाई जन्मदिनको शुभकामना,हामि तपाईको दिर्गायुको कामना गरेर तपाईको काटिएको घाउ सिलाएर निको होस् भन्ने चाहन्छौ,तपाईको फेरिएको किड्नी फेरी पनि फेरियोसनै भन्ने चाहन्छौ,तपाई बाच्नुहोस भन्ने चाहन्छौ,तर तपाई हाम्रो देशको नक्सानै केक बनाएर काट्नु हुन्छ र टुक्रा टुक्रा पार्नु हुन्छ ?
यो बिदेशी संस्कारलाई गलत छ भनेर मान्छेले केक काट्न छाड्दै गएको अवस्थामा तपाईले त नक्सै काटी दिनु भयो,अब नक्सा काटेर खाए पछि के बाँकी रहन्छ ? तपाईले यो कस्तो नराम्रो बिम्व प्रस्तुत गर्नुभएको ? तपाईले सिकाएको राष्ट्रबाद यहि हो ? यो कस्तो राष्ट्रबाद हो ?
तपाईका सल्लाहकार त तोरी नै छन् थाह भएको कुरा हो,तर तपाई संग पनि यत्ति सोच्न सक्ने हेक्का नभएकै हो ? तपाईले भुल्नु नहुने कुरा अहिले तपाई देशको कार्यकारी प्रमुख हो देशको सामान्य नागरिक लाई त यो गलत कार्य हो भन्ने लाग्छ भने तपाईले कसरि यो काम गर्नुभयो ? तपाई बाट देशको नक्सा काटिनु देश प्रेम हैन देश प्रति घृणा छ भन्ने बुझाउनु हो,प्रधानमन्त्री ज्यु जे गर्नु भयो गलत गर्नुभयो ।